Dad badan ee ku dhinteen oo ka kacay Goob Xaflad Muusik ah ay ka socotay Daawo Sawirro!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Dad badan ee ku dhinteen oo ka kacay Goob Xaflad Muusik ah ay ka socotay Daawo Sawirro!!
Dad badan ee ku dhinteen oo ka kacay Goob Xaflad Muusik ah ay ka socotay Daawo Sawirro!!
Dab xoogan ayaa qabsaday guri kuyaala magaalada Oakland gobolka California ee dalka Mareykanka, waxaana dabkan ka dhashay qasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
In ka badan 9-qof oo u badnaa dhalinyaro ayaa ku dhimatay dabkan ka kacay dhismaha ay ku caweenayeen , halka kuwa kalana dhaawacyo ay soo gaareen, waxaa sidoo kale jira dad la la’yahay oo loo maleenayo in ay ku jiraan dhismaha.
Guriga uu dabku ka kacay ayaa la sheegay in ay ku sugnaayeen dad lagu qiyaasay ku dhawaad boqol qof, waxaana halkaasi ka socotay xaflad Musik oo ay ka qeyb qaadanayeen dad u badan dhalinyaro da’dooda u dhaxeysay 20 sano ilaa 30.
Madaxa waaxda dabka ee magaalada Oakland Teresa Deloche-Reed ayaa sheegay in dabku qasaaro xoogan uu geestay ayna ku dhinteen dad gaaray 9-qof, waxa uuna intaa raaciyay in suurto gal tahay in qasaaraha kasii bato inta hada la ogyahay.
Ehelada iyo asxaabta dadka dabku ku dhintay ayaa isugu soo baxay halka ay dhibaatadu ka dhacday, waxa ayna si weyn uga murugeesnaayeen dhibaatada ku dhacday dhalinyaradii xaflada ku caweeneysay.
Dabka ayaa waxaa dhaliyay Koronto sida la sheegay waxaa kale oo qaasaraha usababay dadka qaar oo in ee cabsanaayeen ka dhacasanaayeen loo maleynaaayo iyo daaqadaha oo kutaxnaay birar ayna ka baxasan kareyn.
Smoke pours from a warehouse, which caught fire during a dance party in Oakland, California, U.S. December 3, 2016. Seung Lee/Handout via Reuters
Previous PostDAAWO: Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo Shaaciyey Shir-qool Loo diyaariyey Xubnaha maamulka S.land iyo Xiisada Doorashooyinka Soomaaliya Muuqaal!! Next PostSenator ka tirsan aqalka sare oo xafiis uu ugu adeegayo bulshada ka furay Cadaado Daawo Sawirro!!